मीना घोरसाइने,काठमाडौँ । हे मनमोहक पर्वतमाला ! गौरवशाली उच्च हिमाल !
लिच्छविकालमा विभिन्न कलासंस्कृतिको विकास भएको थियो । त्यसपटि मल्लले नेपाली कला संस्कृतिलाई उचाइ थप्ने काम गरे । मल्लकालपछि शुरु भएको शाहकालमै नेपाल एकीकरणको कामलाई जोड दिइएको थियो । गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले अङ्ग्रेजको आक्रमणबाट देशलाई जोगाउन राज्य एकीकरण हुनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेका थिए । उनले नेपालमण्डल, बाइसेचौबीसे, चौदण्डी, मकवानपुर आदिमा विभक्त नेपाललाई एकीकरण गरेका थिए । उनको एकीकरणको कामलाई उनका छोरानातिले पनि निरन्तरता दिएका थिए । बलभद्र कुँवर, भक्ति थापालगायत योद्धाले सो समयमा राज्य एकीकरणमा योगदान पुर्‍याएका थिए । त्यसपछि कोतपर्वका साथ राणाकाल शुरु भयोः
औँसी झैँ कालो नि यो जङ्गे शासन तर्साउँछ रातीमा
राणाकालमा जनताले कहिल्यै स्वतन्त्रताको अनुभूत गर्न पाएनन् । राणाले जे भन्छन्, सोही अनुरुप नै जनता चल्नुपर्थ्यो । ‘मकैको खेती’ नामक पुस्तक लेखेकै कारण कृष्णलाल अधिकारीलाई राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेरले कारागारमा सडाए । राणाकालको अन्त्यका लागि योगमायाको सुधार अभियान पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । आफ्नो अडानलाई नमानेपछि उनले आफ्ना अनुयायीसहित जलसमाधि लिएकी थिइन् । राणाशासनको ज्यादती बढी भएपछि धर्मभक्त माथेमा, गङ्गालाल श्रेष्ठ, शुक्रराज शास्त्री र दशरथ चन्द आदिले पनि शहादत दिए ।
संसदीय व्यवस्था परम्परागत ढङ्गले चल्दै गर्दा तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(माओवादी)ले भूमिगत भएर सशस्त्र युद्ध थाल्यो । यही बीच राजा ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिएपछि सात राजनीतिक दल र माओवादी मिलेर २०६२÷०६३ को आन्दोलनको नेतृत्व गरे । द्वन्दकाल र जनआन्दोलनमा हजारौंँ जनताले ज्यान गएको थियो । दोस्रो जनआन्दोलनको उपज देशमा लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्र स्थापना भयो । विसं २०७२ मा गएको भूकम्प नेपालको
राजनीतिमा एक अर्को कोशेढुङ्गा भयोः
नाटकका रचयिता शीतविन्दु विगतको इतिहासलाई बिर्सिएमा भविष्य नबन्ने बताउछन् । उनी भन्छन् । “इतिहास बिर्सने राष्ट्रको भविष्य सम्भव छैन ।”
गीतिनाटकको निर्देशन वीरेन्द्र हमालले गरेका हुन् । नाटकमा नृत्य निर्देशन गोरन चौधरी र सहनृत्य सवनम सिलवालको थियो ।